Splicing Dabara Adaba Manufacturers, Suppliers - China Splicing Dabara Adaba Factory
JK Type ígwè waya clip
A na-eji obere ihe ngekọ nchara ígwè iji jikọta waya nchara.N'ihi na waya nchara siri ike, mmechi ikpeazụ anaghị adị mfe eriri, ya mere a na-eji kaadị waya waya kegide eriri. Dị ka ọkpụrụkpụ nke waya nchara ahụ, ụdị nke kaadị waya nchara ahụ dịkwa iche, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dịka ọkpụrụkpụ nke waya nchara iji zụta ụdị achọrọ. Ngwunye waya nchara kwesịrị ekwesị maka njikọ nke ọla kọpa na waya aluminom na eriri waya waya na ngwaọrụ eletriki eletriki. Ọ pl ...
Akụrụngwa dị iche iche dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, iji wụnye wires dị iche iche na waya waya, ihe mejupụtara nke eriri insulator na-agbanye mgbanaka, na-ejikọ wires nke nrụgide dị iche iche, ọkpọkọ, na-emezue onye na-eduzi nkewa na ụdị dị iche iche nke etiti, wdg. , na ụlọ elu ahụ nwere ụdị waya niile, yana metụtara nha nke onye na-eduzi ya ka ọ bụrụ ihe nchebe, ga-arụkọ ọrụ ọnụ. O metụtara nchekwa nke waya ma ọ bụ ụlọ elu, ọbụlagodi na otu n'ime mmebi ahụ, ...
Eletriki kwesịrị ekwesị fasteners Hexagon isi bolts na gbawara ntụtụ oghere na shank
ZHEJIANG XINWO ELECTRIC CO., LTD NO.279 Weishiyi Road, Yueqing Economic Development Mpaghara, Wenzhou City, Zhejiang Province, China Email ： cicizhao@xinwom.com Tel ： +86 0577-62620816 Faksị ： +86 0577-62607785 Ekwentị mkpanaka ： + 86 15057506489 WeChat 8 +86 15057506489 WhatsApp ： +86 15057506489
Bimetal mwekota yiri uzo mwekota kpọmkwem na mkpuchi (1KV, 10KV, 20KV)
● Ngwa JB, JBL, JBT, JBTL usoro nke pụrụ iche yiri yiri mwekota mwekota adabara na-abụghị agba njikọ na alaka ụlọ ọrụ na-eduzi na efefe n'elu. A na-eji ya dị ka mkpuchi mkpuchi na mkpuchi mkpuchi. Feature Njirimara nhazi 1. Họrọ ihe mgbochi oxidation aluminom alloy 2. A na-ejikọta akụkụ ahụ na-enweghị ada ada n'oge nrụnye 3. A na-ejigide okirikiri okirikiri na mpaghara buru ibu, na onye na-eduzi ya adịghị mfe creep ● mkpuchi mkpuchi arụmọrụ .. .
Ngwa USB na ajị anụ-isi
1. Nchịkọta ngwaahịa aha aha ： Mgbapụta Trik （Usoro BLMT） representdị ihe nnọchiteanya usoro BLMT- □□ / □□ - □□ BLMT-dayameta nke ịgbanye ezumike / ezigbo onye na-eduzi ihe dị iche iche-ngwaahịa nlereanya 2. Ngwa Torsion terminals bụ njikọ ejiri maka ijikọ wires. na akụrụngwa, nke a na-ejikarị maka ijikọ wires ndị a gwara mmanụ, wires aluminom, wiwi aluminom, wires aluminom na wired ọla kọpa na ọnọdụ ndị na-adịghị. 3. Akụkụ nke ngwa Kwesịrị ekwesị na-eduga akara ： 25-240㎜². 4.Nkà na ụzụ param ...